Ukushona kwabantu abaningi kubangwa yizinduna ezithanda ukwenza imali esheshayo | Scrolla Izindaba
Ukushona kwabantu abaningi kubangwa yizinduna ezithanda ukwenza imali esheshayo
Ukuphelelwa yithemba lokuthola izitende zezindlu, iziza zomndeni nezinduna ezinomhawu yikho kanye ekwenza kube nokushona kwabantu okungenasidingo ngesikhathi semvula.
INkosi uSandile Ngomane uthe izinduna ezizama ukwenza imali esheshayo zidayisa izitende kubantu abadinga usizo ezindaweni ezinamanzi kakhulu eduze kwemifula nasemadamini.
Isiza esifinyelela emalini eyizi-R20,000, uhlelo olubi lokuzuza imali.
“Izinduna ezaba izitendi eduze kwemifula, amadamu nemifudlana ngemuva kokushintshaniswa kwemali, kumele ziboshelwe ukuminza kanye nokushona kwabantu ngalesi sikhathi,” kusho iNkosi Ngomane.
Amakhulu abantu abaphelelwe yithemba endaweni yaKanyamazane, eMbombela bayaqhubeka nokuba yizisulu zezinduna ezingathembekile ezisizakala ngalesi simo esibucayi futhi zibakhokhisa imali eyizi-R20,000 ngentengo yomhlaba.
Iningi lamakhaya akhukhulwe yi-Cyclone Eloise lalitholakala ezindaweni ezingamaxhaphozi, emihosheni nasezindaweni ezinamanzi amaningi.
UJabulani Ngcobo utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi uvela eGoli futhi wathola isiza ngoba ecabanga ukuthi uzokonga imali.
“Ngakhokha imali eyizi-R10 000 ngesitandi okumele ngabe ngesamahhala. Abanye omakhelwane bami bakhokha imali eyizi-R20,000.”
UNgcobo nabanye abaningana abathinteka Kanyamazane bakhishwe ezindaweni zabo futhi kuyimanje babekwe kwezinye izindawo ezibandakanya izikole namasonto.
IMpumalanga ibe ngesinye sezifundazwe ezithinteke kakhulu eziwelwe yifu elimnyama ngemuva komonakalo odalwe yi-Cyclone Eloise.
Isisulu emijondolo yaKanyamazane, uSipho Makulube wakhukhuleka nengxenye yendlu yakhe eyakhiwa eduze komfudlana kanti namanje ukuthungathwa kwesidumbu sakhe kusaqhubeka.